MNMC invites the donations of cash and hospital supplies from individuals and organizations for prevention and control of COVID-19 | Myanmar Nurse and Midwife Council
MNMC invites the donations of cash and hospital supplies from individuals and organizations for prevention and control of COVID-19
by mnmcadmin | Apr 7, 2020 | News |0comments
မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားကောင်စီသည်COVID19 အား လက်ရှိရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေ ကြသောသူနာပြုနှင့် သားဖွား၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအတွက်တဖက်တလမ်းမှ အနဲငယ် ဖြစ်စေအထောက်အပံ့ဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်၍ရောဂါကာကွယ်ဝတ်စုံပစ္စည်းဝယ်ယူရန်အလှူခံခဲ့ပါသည်။ ယနေ့အထိပစ္စည်းမှာယူစုစုပေါင်းမှာ
၁။ Grade Ex14126 PPE 400၊
၂။ N 95 mask 400 No.
၃။ Surgical Mask 100 boxes
၄။ Surgical 5000(၁၀၀ဘူး)၊
၅။ nfrared Thermometer 50 No.
စုစုပေါင်းတန်ဖိုး ၁၈၈ သိန်းကျော်ဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါ၍ပစ္စည်းများရောက်ရှိလာမည့်ဧပြီလ ၈ ရက်အတွင်း တတ်အားသမျှလှုဒန်းပေးကြပါရန်နှင့် လာရောက်လှုဒန်းပါသော အလှူရှင်များ အားလုံး ကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါသည် <
Mid-term Evaluation of Strategic Plan (2019-2020) of Myanmar Nurse and Midwife Council (MNMC)